Qaramada Midoobay oo shaacisay caqabado badan oo heysta Doorashada Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaramada Midoobay oo shaacisay caqabado badan oo heysta Doorashada Somalia
Ardaan Yare 26 December 2020 26 December 2020
Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan ayaa ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo Caqabado badan oo dowladda Federaalka la kulantay sandkaan sii dhammaanaya ee 2020.
James Swan ayaa waxaa uu sheegay in Soomaaliya caqabadaha ay la kulantay ay kamid yihiin dhinacyada siyaasadda, amniga iyo bani’aadamnimada, iyo Musiibada COVID-19, Isla markaana ay jiraan tallaabooyin horumar ah oo dowladda gaartay.
Sidoo kale Ergayga gaarka ah James ayaa waxaa uu tilmaamay in sanadka Cuusb ee 2021 uu muhiim u noqon doono horumarka ka jira dalka, isla markaana waxaa carabka ku dhuftay in ammaanka uu noqon doono mid lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya.
Isaga oo sii hadlaayay James Swan ayaa waxaa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashooyinka dalka ay ku dhici doonaan si nabad ah, isla markaana heshiis laga gaari doono muranka ka taagan doorashadii lagu heshiiyay.
“Soomaaliya waxa ay la kulan tahay 2020 caqabado badan, oo ay ka mid yihiin dhinacyada siyaasadda, amniga iyo bani’aadamnimada, iyo sidoo kale Musiibada COVID-19. Isla markaana, waxaa jiray astaamo horumar leh sida deyn cafinta iyo heshiiskii hoggaamiyeyaashu ay ka gaareen hannaanka doorashada ee sannadka 2020-2021. Waa muhiim in dareenka isu tanaasulka, iyo sidoo kale is afgarad iyo wadahadalladu, ay sii socdaan si loo ilaaliyo loona horumariyo guulaha la gaaray,” ayuu yiri Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
Waxaa uu hadalkiisa sii raaciyay James Swan “2021 wuxuu noqon doonaa mid muhiim u ah horumarka Soomaaliya,” ayuu yiri. “Ammaanka, waxa uu ahaan doona mid ku wareega dowladda Soomaaliya oo iyada ayaa mas’uul ka noqon doonta; dhaqaalaha, waxa ay sii wadi doontaa dib u habeynta si ay u xaqiijiso faa’iidada buuxda ee ay ku guuleysatay ee geeddi-socodka deyn-cafinta, xaaladda bani’aadamnimada, weli waxaa jira 5.2 milyan oo qof, oo ah qiyaastii saddex meelood meel dadka dalka ku nool, oo u baahan taageero. Iyo, dabcan, hanaanka doorashada ee doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Waxaan rajeynayaa inaan arko wadashaqeyn dheeri ah iyo is afgarad ka dhex dhaca madaxda Soomaalida ee arimahan muhiimka u ah Soomaaliya, iyo sidoo kale tallaabooyin adag oo la xiriira dimuqraadiyeynta dalka, oo ay ku jiraan xoojinta hay’adaha iyo aasaaska doorashooyinka ‘hal qof iyo hal cod ah’ sanadka 2024 -25.”
Sheekh Shariif oo Digniin Cusub u diray Madaxda dowladda, kadib markii….